Fa maninona ny iPhone no miverina mamerina? Ity ny The Fix! - Iphone
tsy afaka mifandray amin'ny fivarotana app apple
maninona no tsy misy ny fako
ny fomba famadihana iphone tsy misy ny bokotra herinaratra
Fa maninona ny iPhone no miverina mamerina? Ity ny The Fix!
Fa maninona ny iPhone no miverina mamerina, ary inona no ataoko amin'izany? Matoky ny iPhones izahay ary mila miasa izy ireo rehetra ny fotoana. Mety tsara raha misy antony tokana mahatonga ny iPhones hamerina hatrany hatrany, saingy tsy misy bala majika amin'ity olana ity. Amin'ity lahatsoratra ity dia hanazava aho inona no mahatonga ny iPhones hanomboka hamerina hatrany ary hasehoko anao ny fomba fanamboarana ny olana iPhone restarting .
Tompon'antoka tompona iPhone X: Raha manana iPhone X na iPhone XS izay miverimberina foana ianao dia vakio azafady ny lahatsoratro vaovao hahalalanao azy ny fomba hanakanana ny iPhone X tsy hamerimberina hatrany . Raha tsy mandeha ireo fanamboarana ireo dia avereno ary araho ity torolalana ity.
Fa maninona ny iPhone no miverina mamerina?
Ireo iPhones izay miverina mamerina amin'ny ankapobeny dia tafiditra ao anaty sokajy roa:
iPhones izay miverina miandalana: Azonao atao ny mampiasa ny iPhone mandritra ny fotoana fohy tsy misy olana mihitsy, ary avy eo mamerina tampoka ny iPhone-nao.
iPhone restart loop: Ny iPhone-nao dia manomboka foana ary tsy azo ampiasaina mihitsy. Miseho ny fango Apple ary manjavona eo amin'ny efijery, hatrany hatrany.
Raha tafiditra ao amin'ny sokajy faharoa ny iPhone-nao dia mandehana aloha mankany amin'ny dingana 5. Tsy azo atao ny manao ireo dingana voalohany raha tsy afaka mampiasa ilay rindrambaiko amin'ny iPhone-nao ianao. Andao hiroboka, mba hialanao amin'ny hiantsoantso hoe: “Ny iPhone tsy mitsahatra mamerina!” amin'ny saka.
1. Avereno alefa ny iPhone-nao
Alohan'ny hanaovanay troubleshooting mihitsy, alao antoka fa voatazona ny iPhone. Raha manana olana amin'ny findainao ny iPhone dia mety ho io no fotoana farany farany aorianao hamerenana ny angon-drakitrao. Raha mila izany izahay dia haverinay amin'ny laoniny ny iPhone, ary mila backup ianao alohan'ny hamerenanao azy.
Raha mila ianao ampio hanohana ny iPhone-nao , Ny lahatsoratra tohanan'ny Apple dia manana fitsangatsanganana an-tongotra tsara. Vantany vao voatsimbina ianao dia ho vonona hanomboka hanamboatra ny olana raha toa ka miverimberina hatrany ny iPhone na miverina na mamono hatrany ny iPhone.
2. Vaovao farany ny iPhone's Software (iOS)
Toy ny Windows amin'ny PC na OS X amin'ny Mac, ny iOS no rafitra fiasan'ny iPhone. Ny fanavaozana ny iOS dia misy fanamboarana be dia be hatrany ho an'ireo hadisoana rindrambaiko sy olana hafa. Indraindray, ny fanavaozana ny lozisialy dia manamboatra ny olana izay mahatonga ny iPhone tsy hiala amin'ny laoniny na miditra amina loopika famerenana.
Raha hijery raha misy fanavaozana rindrambaiko misy, mankanesa any Fikirana -> Ankapobeny -> Fanavaozana ny lozisialy . Raha misy fanavaozana, apetraho izy. Azonao atao koa ny mampifandray ny iPhone amin'ny solo-sainanao ary mampiasa iTunes hanavaozana ny rindrambaiko iPhone. Raha toa ka miverimberina hatrany ny iPhone dia iTunes no mety ho filokana tsara indrindra ho anao.
3. Fantaro raha misy fampiharana manosika ny iPhone hiverina indray
Tena tsy fahita firy amin'ny fampiharana iray ny mahatonga ny iPhone hamerina na hamono ary hamono hatrany hatrany. Amin'ny ankabeazany, ny rindrambaiko amin'ny iPhone dia voaro amin'ny fampiharana olana. Raha ny voalaza dia misy fampiharana 1,5 tapitrisa mahery ao amin'ny App Store ary tsy lavorary daholo izy ireo.
Raha nametraka rindrambaiko iray ianao alohan'ny nidiran'ny iPhone tamin'ny famerenana famerenana indray, esory ilay rindrambaiko ary jereo raha mivaha ny olana.
Fikirana -> Tsiambaratelo -> Analytics -> Data Analytics dia toerana iray hafa hijerena rindrambaiko fampiharana. Ara-dalàna ny mahita fidirana marobe amin'ity lisitra ity. Kitiho haingana ilay lisitra ary tadiavo ireo fampiharana izay voatanisa hatrany hatrany. Raha mahita ianao, ny fanesorana ilay app dia mety manamboatra ny iPhone-nao.
4. Avereno ny fikirana rehetra
Avereno ny fikirana rehetra tsy bala majika, fa afaka mamaha olan'ny rindrambaiko sasany. Mandeha Fikirana -> Ankapobeny -> Famerenana -> Avereno ny fikirana rehetra mba hamerenana amin'ny laoniny ny fikirakira iPhone amin'ny fivadihan'ny orinasa. Tsy ho very ny fampiharana na ny angon-drakitrao, fa tsy maintsy mampiditra ny teny miafinao Wi-Fi indray ianao.
Ny tadivavarana iPhone dia mety hitranga amin'ny alàlan'ny fifandraisan'ny iPhone amin'ny findainao. Ny karatra SIM-nao dia mampifandray ny iPhone amin'ny findainao, ka ny fanesorana azy no fomba tsara indrindra hamahana ny olana izay tsy miato ny iPhone.
Aza manahy: Tsy misy zavatra tsy mety rehefa esorinao ny karatra SIM-nao. Hifandray indray amin'ny mpampita anao avy hatrany ny iPhone raha vantany vao averinao.
manimba ny tokantranoko ny zanako vavy
Lahatsoratra tohanan'ny Apple momba ny ny fomba fanesorana ny karatra SIM amin'ny iPhone-nao hampiseho aminao ny toerana misy ilay karatra SIM amin'ny iPhone-nao. Hampiasa clip taratasy ianao mba hamoahana ny fitoeran-tsolika SIM amin'ny iPhone-nao.
Raha manamboatra ny olana ny fanesorana ny karatra SIM dia avereno ao amin'ny iPhone ny karatra SIM. Raha miverina ny olana aorian'ny famerenanao ny karatra SIM anao dia mila averinao amin'ny laoniny ny iPhone (dingana 7) na soloinao ny mpitondranao.
Raha tsy mahavaha ny olana ny fanesorana ny karatra SIM dia aza avereno ao anaty ny karanao SIM mandra-pahavitanao ny dingana manaraka. Raha te hianatra bebe kokoa momba ny karatra SIM an'ny iPhone ianao dia zahao ny lahatsoratro nantsoina “Fa maninona ny iPhone no miteny hoe tsy misy karatra SIM?” .
Tsy tokony hanao famerenana sarotra amin'ny iPhone ianao raha tsy tena ilaina izany. Izy io dia toy ny famonoana solosaina birao amin'ny alàlan'ny fanalana azy amin'ny rindrina. Voalaza fa, ny iPhone restart loop dia iray amin'ireo fotoana izay ahazoana antoka famerenana mafy.
Raha te hanao reset mafy dia tazomy ny bokotra herinaratra SY Bokotra an-trano (ny bokotra boribory eo ambanin'ny efijery) miaraka amin'izay mandra-pahatonga ny efijery iPhone anao hiseho ary hiseho indray ny sary famantarana Apple.
Amin'ny iPhone 7 na 7 Plus, dia somary tsy mitovy ny bokotra ilainao tsindriana raha te hanao famerenana mafy. Tsindrio miaraka ary tazomy ny bokotra herinaratra ary ny bokotra midina.
Raha manana iPhone 8, 8 Plus, na X ianao, dia hafa koa ny fizotry ny famerenana mafy. Tsindrio ary votsory ny bokotra ambony , avy eo ny bokotra midina , avy eo tsindrio ary tazomy ny bokotra sisiny .
Na inona na inona modely iPhone anananao dia alao antoka fa tsara ianao tazomy miaraka ny bokotra roa mandritra ny 20 segondra . Gaga ny olona rehefa tonga tao amin'ny Apple Store ary manamboatra haingana ny iPhone maty miaraka amina reset mafy. izy ireo eritreritra nanao reset mafy tao an-trano izy ireo, saingy tsy nitazona ny bokotra roa izy ireo nandritra ny fotoana lava.
Raha nesorinao ny karatra SIM tamin'ny iPhone-nao tamin'ny dingana teo aloha dia fotoana mety izao hamerenana azy ao amin'ny iPhone-nao. Nofoananay ny mety hisian'ny karatra SIM anao hamerina amin'ny laoniny ny iPhone. Manantena aho fa ny famerenana mafy dia hamaha ny olana izay niverenan'ny iPhone foana, fa raha mitohy izany dia mila mamerina ny fitaovanao ianao amin'ny fanarahana ny torolàlana etsy ambany.
7. Avereno amin'ny laoniny ny iPhone ampiasainao amin'ny iTunes
Ny famerenana amin'ny laoniny ny iPhone dia mamafa sy mamono tanteraka ny rindrambaiko (iOS) an'ny iPhone, ary afaka manafoana ireo olan'ny rindranasa miaraka amin'izay. Rehefa haverina amin'ny laoniny ny iPhone dia hofoananay ny mety hisian'ny olana amin'ny lozisialy mety hiteraka ny iPhone indray - izany no mahatonga ny Apple techs manao izany matetika.
Mila mifandray amin'ny solosaina ny iPhone-nao mba hamerenana amin'ny laoniny. Manoro hevitra aho ny hanao karazana famerenana amin'ny laoniny manokana izay nantsoin'ny Apple techs hoe a Averina amin'ny laoniny DFU , izay mandeha lalindalina kokoa noho ny famerenana amin'ny laoniny mahazatra ary afaka mamaha olana maro kokoa. Tsy ho hitanao izany na aiza na aiza ao amin'ny tranonkalan'i Apple - vakio ny lahatsoratro mba hianarana Ahoana ny fomba hamerenan'ny DFU ny iPhone anao .
Aorian'ny famerenana amin'ny laoniny dia ho azonao atao ny mamerina ny mombamomba anao manokana avy amin'ny nomaniny ho solon'izay iPhone amin'ny iTunes na iCloud. Raha mbola manana olana ianao dia miverena eto ary mamakia hatrany.
8. Zahao ny olan'ny fitaovana
Ny olan'ny Hardware dia antony iraisana mahatonga ny iPhones tafahitsoka ao anaty loop indray. Raha mampiasa tranga amin'ny iPhone ianao dia esory alohan'ny hanohizanao.
Jereo akaiky ny seranan-tsambo famahana eo amin'ny faran'ny iPhone-nao. Hamarino raha misy fako miraikitra ao anatiny sy raha misy famantarana ny hakamoana.
Raha misy tsy mety, dia makà borosy nify mbola tsy nampiasanao ary esory moramora ny seranan-tsambo. Ny fizaran-tany fohy na olana hafa ao anatin'ny seranan-tsambo dia mety hiteraka olana isan-karazany amin'ny iPhone.
iphone voicemail tenimiafina tsy mitahiry
9. Mety mila manamboatra ny iPhone ianao
Nofoananay ny mety hisian'ny olana iray amin'ny lozisialy ka mahatonga ny iPhone tsy hiala amin'ny laoniny ary izahay dia nanamarina ireo olan'ny fitaovana eo ivelan'ny iPhone. Raha ao anaty loop indray ny iPhone dia mety mila amboarina ny iPhone-nao.
Raha misafidy ny hahazo fanampiana any amin'ny Apple Store eo an-toerana ianao dia alao antoka fa manana fotoana ihaonana amin'ny Genius Bar ianao mba tsy hiandrasanao. Ny safidy hafa tsy lafo hanin-kotrana , serivisy fanamboarana mailaka izay miasa tsara.
Amin'ity fotoana ity dia manantena aho fa efa nalaminay ny olana izay nahatonga ny iPhone tsy hiala eo foana. Te handre ny zavatra niainanao aho ao amin'ny fizarana fanehoan-kevitra etsy ambany, ary raha manana fanontaniana hafa ianao dia aza misalasala manontany azy ireo ao amin'ny Vondrona Facebook Payette Forward.